Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) - Hello Sayarwon
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ)
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) ကဘာလဲ။
အိပ်ရာနာကို ဖိအားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာလို့လည်းခေါ်ပြီး အရေပြားနဲ့တစ်သျှူးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖိအားဖြစ်စေတဲ့အတွက် ဖြစ်လာတဲ့အနာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာနာအများစုဟာ ဖနောင့်၊ ခြေကျင်းဝတ်၊ တင်ပဆုံ၊ မြီးညောင့်ရိုး စတဲ့ အရိုးအမာခံရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အိပ်ရာနာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများသူ အများစုဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် အိပ်ရာပေါ်၊ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ အချိန်ကုန်လွန်နေရသူများဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓါအနေအထားကို ပြောင်းလဲဖို့ ခက်ခဲသူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရာနာဟာ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အများစုဟာ ကုသလို့ ပျောက်ကင်းနိုင်ပေမယ့် တချို့ကတော့ ဘယ်တော့မှ မပျောက်ကင်းနိုင်တော့ပါဘူး။
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆေးရုံ (သို့) အိမ်မှာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ခံယူနေရသူများမှာ တွေ့ရများပါတယ်။
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တခြားနေရာများထက် အေးစက်ခြင်း (သို့) ပူနွေးခြင်း
အိပ်ရာနာတွေဟာ အနက်၊ ဆိုးရွားမှုနဲ့ တခြားအချက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး အဆင့်အမျိုးမျိုး သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အနာပျက်စီးမှုပမာဏဟာ နီရဲခြင်း၊ အရေပြားပြဲခြင်းကနေ ကြွက်သားနဲ့ အရိုးတွေပါဝင်တဲ့ထိ ရှိပါတယ်။
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အရေပြားကို ဖိအားဖြစ်စေပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကို လျော့နည်းစေရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုကို ကန့်သတ်စေတဲ့ တခြားအကြောင်းအရာများကလည်း အရေပြားကို ထိခိုက်လွယ်စေပြီး အိပ်ရာနာဖြစ်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
အဓိကဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်း ၃မျိုးကတော့
ဖိအား။ ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ ဘယ်အစိတ်အိပုင်းကိုမဆို ဖိအားတောက်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဟာ သွေးရောက်ခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုဟာ တစ်သျှူးတွေဆီ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ တခြားအဟာဟာရဓါတ်တွေကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီအာဟာရတွေမရှိရင် အရေပြားနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်သျှူးများဟာ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုနည်းသူများမှာ ဒီဖိအားဟာ ကြွက်သား၊ အဆီ စတာများနဲ့ သေချာမအုပ်မိထားတဲ့ နေရာတွေ (ကျောရိုး၊ မြီးညောင့်ရိုး၊ လက်ပြင်၊ တင်ပဆုံ၊ ဖနောင့်၊ တံတောင်ဆစ်) ကို သက်ရောက်ပါတယ်။
ပွတ်တိုက်အား။ အရေပြားနဲ့ အဝတ်အစား၊ အိပ်ရာကြား ပွတ်တိုက်အား ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါဟာ အရေပြားကို ပိုမိုထိခိုက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိုစွတ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက်ပွတ်အား။ မျက်နှာပြင်၂ခု ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ရွေ့လျားရင် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဥပမာ အိပ်ရာဟာ ခေါင်းပိုင်းမှာ မြင့်နေရင် အောက်ကို လျှောကျပါတယ်။ မြီးညောင့်ရိုးလျှောကျတဲ့အခါ အရိုးပေါ်က အရေပြားဟာ သူ့နေရာမှာပဲ ကပ်ကျန်တာကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရွေ့လျားမှုမရှိခြင်း။ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ ကျောရိုးမကြီး ထိခိုက်ထားခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာရုံခံစားမှုမရှိခြင်း။ ကျောရိုးဒဏ်ရာရခြင်း၊ အာရုံကြော ချို့ယွင်းခြင်း စတာတွေဟာ အာရုံခံစားမှု မရှိခြင်း ဖြစ်နိုငါပတယ်။ နာကျင်မှု၊ မအီမသာဖြစ်မှုကို မခံစားနိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ်အနေအထားကို ပြောင်းလဲဖို့ သတိပေးလက္ခဏာတွေကို မသိဘဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာဟာရနှင့် ရေဓါတ်နည်းခြင်း။ လူများဟာ အရည်များ၊ ကယ်လိုရီ၊ ပရိုတိန်း၊ ဗီတာမင် စတာတွေကို လု့လောက်စွာ လုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှစာ အသားအရေကောင်းပြီး တစ်သျှူးတွေ ပျက်စီးခြင်း မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေသာ ရောဂါများ။ ဆီးချိုနဲ့ သွေးကြောရောဂါတွေဟာ သွေးလည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး တစ်သျှူးတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယရှိရင် စမ်းသပ်မှုတွေ အသေးစိတ်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အနာရှိမရှိ၊ ဘယ်အဆင့်ရောက်နေသလဲ စသဖြင့် စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အထွေထွေကျန်းမာရေး အခြေအနေသိရအောင် သွေးစစ်ဆေးမှုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Bedsores (pressure ulcers) ( အိပ်ရာနာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အိပ်ရာနာရှိရင် ကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းတွေ တိကျစွာ လိုက်နာခြင်း၊ တခြားအရေပြားတွေ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ဂရုစိုက်ခြင်း၊ အနာကျက်အောင် ဂရုစိုက်ခြင်း စတာတွေနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။
တခြားကုသနည်းတွေကတော့ အနာရဲ့ အဆင့်အလိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ အနာရဲ့ အနားက ကောင်းနေသေးတဲ့ အသားတွေကို အကာအကွယ်အုပ်ပြီး၊ ချောဆီလိမ်းပြီး ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရတဲ့နေရာကို ဆေးထည့်ပြီး၊ မကောင်းတဲ့ အသားတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး အနာကျက်မြန်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် မကောင်းတဲ့အသားတွေကို ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ရပါမယ်။ အနာနက်ရင် အရေပြား အစားထိုးခြင်း၊ ပြုပြင်ခွဲစိတ်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေဂါပိုးဝင်ရင် ပဋိဇီဝဆေးတွေ သောက်သုံးခြင်း၊ လိမ်းဆေးလိမ်းခြင်း၊ ဆေးသွင်းခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက အိပ်ရာနာ အတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
အလေးချိန်ကို မကြာခဏပြောင်းပါ။ ဝှီးချဲကို အသုံးပြုသူဆိုရင် ၁၅မိနစ် တခါ ပြောင်းလဲပါ။
တနာရီကြာတိုင်း အနေအထားပြောင်းလဲဖို့ အကူအညီတောင်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်အားလည်း ကိုယ်သုံးပါ။ အပေါ်ပိုင်းအားရှိရင် မိမိဖာသာ မတင်ပါ။
အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဝှီးချဲကိုသုံးပါ။ တချို့ဝှီးချဲတွေဟာ ဖိအားတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
ကူရှင်များ၊ မွေ့ယာများ သုံးပါ။ ဖိအားကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒိုးနပ်မုန့်ပုံစံ ကူရှင်ကို မသုံးပါနဲ့။ သူတို့ဟာ ဖိအားကို တနေရာတည်းမှာ စုနေစေပါတယ်။
အိပ်ရာအနိမ့်အမြင့်ကို ညှိပါ။ ခေါင်းပိုင်းကို မြှင့်ထားရင် ၃၀ဒီဂရီထက် မထောင်ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါတ်တိုက်ြခ်ငးအားကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အရေပြားကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ နူးညံ့တဲ့ဆပ်ပြာများနဲ့ အရေပြားကို ဆေးကြောပါ။ ဆီး၊ ဝမ်း စတာတွေနဲ့ ထိတွေ့ပြီး စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
အရေပြားကို ကာကွယ်ပါ။ ပေါင်ဒါဖြူးပါ။ ခြောက်သွေ့ရင် လိုးရှင်းလိမ်းပါ။ အိပ်ရာများ၊ အဝတ်အစားများ လဲလှယ်ပေးပါ။ အဝတ်အစားများရဲ့ ကြယ်သီးတွေ၊ အဝတ်ခေါက်တွေဟာ အရေပြားကို ထိခိုက်မနေအေပါင် သတိပြုပါ။
အရေပြားကို နေ့စဉ် စစ်ဆေးပါ။ အိပ်ရာနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှမရှိ စစ်ဆေးပါ။
Bedsores (pressure ulcers). http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/bed-sores/home/ovc-20315615. Accessed August 16, 2017.
Bedsores (Decubitus Ulcers). https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/bedsores-decubitus-ulcers-. Accessed August 16, 2017.